URichard Howe - uRoyal Navy uRichard Howe
URichard Howe - Ubomi bokuqala kunye noMsebenzi:
Wazalelwa ngoMatshi 8, 1726, uRichard Howe wayengunyana weViscount uEmanuel Howe noCharlotte, Countess waseDarlington. Unina-dade waseKing George I, unina kaHowe wayenempembelelo yezopolitiko eyayinceda kwimisebenzi yabantwana bayo. Ngoxa abazalwana bakhe uGeorge noWilliam baphishekela imisebenzi emkhosini, uRichard wakhetha ukuya elwandle waza wathola isigunyaziso semigodlo e-Royal Navy ngo-1740.
Ukujoyina iHMS Severn (50 izibhamu), uHowe wathatha inxaxheba kwihambo likaCommodore George Anson ePacific ewa. Nangona u-Anson ekugqibeleni wajikeleza ihlabathi, inqanawa yaseHowe yaphoqeleka ukuba ibuye emva kokusilela ukujikeleza iKapa iPhondo.
Njengoko iMfazwe yase-Austrian ihamba phambili, uHowe wabona inkonzo kwiiCaribbean e-HMS Burford (70) kwaye wabamba iqhaza ekulwa eLa Guaira, eVenezuela ngoFebruwari 1743. Wenza i-lieutenant emva kokuthatha isenzo, isikhundla sakhe sisigxina kunyaka olandelayo. Ukuthatha umyalelo we-sloop i-HMS eBaltimore ngo-1745, wahamba ngomkhumbi waseScotland ekuxhaseni imisebenzi ngexesha loYukobi lukaYakobi. Ngoxa wayesekho, wayenxinzekile kakubi entloko ngelixa ebambisana nabantu ababini baseFransi. Wakhuthazwa ukuba abe ngumphathi wamagosa kamva kamva, eneminyaka engamashumi amabini ubudala, uHowe wathola umyalelo weFrigate eHMS Triton (24).
Imfazwe Yeminyaka Eyisixhenxe:
Ukufudukela kwi-Admiral Sir Charles Knowles, i-HMS Cornwall (80), uHowe wathatha isikhephe ngexesha lokusebenza kwiCaribbean ngo-1748.
Ukuthatha inxaxheba kwi-Oktobha 12 iMfazwe yaseHaana, kwakuyinto yakhe yokugqibela yokulwa. Ngokufika koxolo, uHowe wakwazi ukugcina imiyalelo yokuhamba kolwandle kwaye wabona inkonzo kwiCanethi naseAfrika. Ngo-1755, ngokuqhubeka kweMfazwe yaseFransi ne-Indiya eNyakatho Melika, uHowe wabuyela ngaphesheya kwe-Atlantiki ngokuya kwe-HMS Dunkirk (60).
Icandelo leCandelo lika- Vice Admiral u-Edward Boscawen , wasiza ekuthinjweni kuka- Alcide (64) noLys (22) ngoJuni 8.
Ukubuyela kwiCancer Squadron, uHowe wathatha inxaxheba kwimigodi yamanzi ngokumelene neRochefort (Septemba 1757) kunye neSt. Malo (ngoJuni 1758). Ukulawula i-HMS Magnanime (74), uHowe wadlala indima ephambili ekuthineni i-Ile de Aix ngethuba lokusebenza kwangaphambili. NgoJulayi 1758, iHowe yaphakanyiselwa kwisihloko se-Viscount Howe kwi-Irish Peerage emva kokufa komntakwabo uGeorge kwi- Battle of Carillon . Kamva ehlotyeni wabamba iqhaza ekuhlaseleni iCherbourg neSt. Cast. Ukugcinwa komyalelo kaMagnanime , wadlala indima kwi-Admiral Sir Edward Hawke inqabileyo eyinqoqo kwi- Battle of Quiberon Bay ngoNovemba 20, 1759.
I nkwenkwezi ephumayo:
Ngemfazwe ekugqibeleni, uHowe wakhethwa ePalamente emele uDartmouth ngo-1762. Wahlala esi sihlalo de ukuphakama kwakhe ukuya kwiNdlu yeeNkosi ngo-1788. Ngonyaka olandelayo, wajoyina iBhodi ye-Admiralty ngaphambi kokuba abe ngumNondyebo we-Navy ngo-1765. indima iminyaka emihlanu, iHowe yaphakanyiswa ukuba ihlonishwe ngo-1770 kwaye yanikwa umyalelo we-Mediterranean Fleet. Ephakanyisiwe kwi-vice admiral ngo-1775, wabonisa iimvo zengqondo ngokuphathelele abavukeli bee-colonists baseMerika kwaye wayeqhelana noBenjamin Franklin.
Ngenxa yezi mvakalelo, i-Admiralty yammisela ukuba alayise iSitishi saseMntla-Amerika ngo-1776, ngethemba lokuba unokunceda ekukhupheleni i- American Revolution . Ehamba ngaphesheya kwe-Atlantic, yena nomntakwabo, uGeneral William Howe , owayengumkhosi waseBrithani kummandla waseMntla Melika, bamiselwa njengabaphathi bezoxolo. Ukuqalisa umkhosi womntakwabo, uHowe kunye neenqwelo zakhe zafika kwiSixeko saseNew York ehlobo le-1776. Exhasa uxolo lukaWilliam lokuthatha isixeko, wafika umkhosi kwi-Long Island ngasekupheleni kweAgasti. Emva komkhankaso omfutshane, amaBritani aphumelela iMfazwe yaseLong Island .
Emva kokunqoba kweBrithani, abazalwana baseHowe bafikelela kwiinkomfa zabo zaseMelika baze badibanisa inkomfa yoxolo kwiStenen Island. Ukuthatha indawo ngoSeptemba 11, uRichard Howe wadibana noFranklin, uJohn Adams noEdward Rutledge.
Ngaphandle kweeyure eziliqela zeengxoxo, akukho mvumelwano efikelelekileyo kwaye amaMerika abuyela kwimigca yawo. Ngoxa uWilliam wagqiba ukuthunjwa kweNew York waza wabamba umkhosi kaGeorge George jikelele , uRichard wayekho phantsi komyalelo wokunqanda inxweme yaseNorth America. Ukungabi nenani elifunekayo leenqanawa, lo khuselo lwabonakala lukhuni.
Imizamo kaHowe yokutywina amachweba aseMerika ayenganyanzeliswa yimfuno yokubonelela ngenkxaso yemikhosi kwimisebenzi yomkhosi. Ehlotyeni ka-1777, uHowe wathumela umkhosi womntakwabo wasezantsi waza wenyusa iChesapeake Bay ukuba iqalise ukulwa noFiladelphia. Ngoxa umninawa wakhe wawahlula iWashington eBrithywine , wathatha iPhiladelphia, wabuyisa kwakhona e- Germantown , iinqanawa zaseHowe zasebenza ekunciphiseni imithombo yaseMelika eMlambo waseDelaware. Oku kugqibeleleyo, iHowe yashiya iinqwelo eziya eNewport, eRI ebusika.
Ngo-1778, uHowe wayegculelwa kakhulu xa efunda ngokutyunjwa kwekhomishini entsha yoxolo phantsi kolawulo lwe-Earl kaCarlisle. Ethukuthele, wangenisa ukuyeka kwakhe okwamkelekileyo ngamukelwa yi-First Sea Sea iNkosi, i-Earl yeSandwich. Ukuhamba kwakhe kungekudala kwanciphisa njengoko iFransi ingena kwimpikiswano kwaye iinqanawa zaseFransi zavela kumanzi aseMelika. Ebhekiswe yi-Comte d'Estaing, leli qela lalingenakukwazi ukubamba iHowe e-New York kwaye yathintelwa ekubeni ingene naye eNewport ngenxa yesiqhwithi esikhulu. Ukubuyela eBrithani, uHowe waba ngumgxekayo othethekileyo wenkokheli kaRhulumente waseNorth North.
Ezi mbono zazimgcina zingamkelanga omnye umyalelo kwaze kwafika urhulumente waseNorth ekuqaleni kwe-1782.
Ukuthatha umyalelo we-Channel Fleet, uHowe wafumana ukhulu kakhulu ngemikhosi ehlangeneyo yamaDatshi, isiFrentshi kunye neSpanish. Ukunyanzeliswa ngokukhawuleza xa kunesidingo, waphumelela ekukhuseleni iimvosa e-Atlantiki, ephethe amaDatshi kwinqanawa, kwaye eqhuba i-Relief yeGibraltar. Esi sigaba sokugqibela sabona ukuba iinqanawa zakhe zanikela inkxaso kunye nokubonelela kwinqanawa yaseBrithani eyayingenakunqandwa ukususela ngo-1779.
Iimfazwe zeNguqulelo yesiFrentshi
Eyaziwa ngokuba ngu-"Black Dick" ngenxa yobume bakhe obugqwethayo, uHowe wenziwe ngeNkosi yokuqala ye-Admiralty ngo-1783 njengenxalenye kaWilliam Pitt urhulumente kaLutsha. Ukukhonza iminyaka emihlanu, wabhekana neengxaki zebhajethi ezonakalisayo kunye nezikhalazo ezivela kumagosa angasebenziyo. Nangona le miba, waphumelela ekugcineni iinqwelo kwiimeko zokulungela. Ekuqaleni kweMfazwe yeSiguqulelo saseFransi ngo-1793, wafumana umyalelo weChane Fleet naphezu kobudala bakhe. Ukubeka ulwandle unyaka olandelayo, wanqoba ukunqoba okugqibeleleyo kwi-Glorious First of June, athabatha iinqanawa ezithandathu zomgca waza wancinca wesixhenxe.
Emva kwephulo, uHowe washiya umhlala-phantsi esebenzayo kodwa wayigcina imiyalelo emininzi ngesifiso sikaKumkani George III. Othandwayo ngabanqwelisi beRoyal Navy, wabizwa ukuba ancede ekuhlaleni i-1797 Spithead mutinies. Ukuqonda iimfuno neemfuno zamadoda, wakwazi ukuxoxisana nesisombululo esamkelekileyo esiye saxolelwa abantu abaye baxhamla, bahlawula iindleko kunye nokudluliselwa kwamagosa angamkelekanga.
Eyaziwa ngo-1797, uHowe waphila iminyaka emibini ngaphambi kokufa ngo-Agasti 5, ngo-1799. Wangcwatyelwa kwintlambo yasekhaya yaseSt. Andrew, eLangar-cum-Barnstone.
I-NNDB: uRichard Howe
Isikhokelo seNapoleon: I-Admiral Richard Howe
Imfazwe Yehlabathi I: I-French Ace uGeorges Guynemer
I-Biography ka-Helena Rubinstein
Biography ye Murasaki Shikibu
UAnna Comnena, uMlando weMbali kunye neNyantana yaseByzantine
21 Abasetyhini abaPhambili AbaFoto Abafanele Uyazi
U-Emma waseNormandy: U-Queen Queen Consort waseNgilandi kabini
Imbali kaEdna St. Vincent Millay
Jikelele uK Curtis E. LeMay: Ubaba we-Strategic Air Command
UJane Boleyn, uMary Rochford
Sifuna Isichaso NgeeMifanekiso Ezizenzekelayo
Yintoni iNovena? (Inkcazo kunye neMimiselo yeNovenas)
Hlola iPlaneti yaseHauma
Ukuqonda uMgangatho weMculo
Ikhulu le-16 leminyaka Umda we-1500 - 1599
Iifayile ZemiSebenzi Ezilula Neempendulo
Iifilimu zeMini yoMhlaba neMiboniso yabantwana
I-Triangle Shirtwaist Factory yoMlilo
Iimpi zeNapoleonic: iMfazwe yaseCopenhagen
Abangcwele Bama-Superhero: Ukuxhamla, amandla okuBonakala kwiindawo ezimbini
I-Movie Picks Enhle yeZenzo zeqela loLutsha
Ukuzingela Kwemandulo - Amacandelo Okubambisa Ngaphambi Kwezolimo
Umthandazo kunye neendinyana zeBhayibhile zokunceda
I-Genius yoMoya kaSwami Vivekananda
Indlela yokuSebenza koMoya kuSebenza
Top 5 Gotta-Haves for Stargazing
Uvavanyo lweBhallo eBlow-Up
Yeka indlela i-Cellvoltic Cell isebenza ngayo
Ubudlelwane obudumileyo be-US-Iranian Relations
Inyama kunye neNdalo; Ngaba i-Free-Range, i-Organic, okanye inyama yeNgingqi Impendulo?
Ukufunda KwamaCold ngexesha loPhicotho-zincwadi